सरिताको शब्द तथा बादलको संगीतमा ‘सुरुवात’ गीत सार्वजनिक (भिडियो हेर्नुहोस्)
Homeसमाचारसरिताको शब्द तथा बादलको संगीतमा ‘सुरुवात’ गीत सार्वजनिक (भिडियो हेर्नुहोस्)
December 29, 2020 admin समाचार 7119
नवगायिका क’विता नाछिरिङ राईको स्वरमा रहेको ‘सुरुवात’ शीर्षकको म्युजिक भिडियो सार्वज’निक भएको छ । सरिता लिङ्देनको शब्द तथा बादल लिम्बूको संगीत रहेको यस गीतमा उद’य राज पौडेलको संगीत संयो’जन रहेको छ । प्रेम सम्बन्धमा आउने उतार’चढावलाई प्रस्तुत गरिएको म्युजिक भिडियोमा आरोशी थापा र दिपेश मगर फि’चर्ड छन्।
साइप्रस राज्यका म’नोरम दृश्यहरु स’मेटिएको यस म्युजिक भिडियोमा आना होन्छेनले छायांकन र अनिल रानाले सम्पा’दन गरेका हुन् । सरिता लिङ्देन र नरेश लिम्बूको नि’र्देशन रहेको भिडियोलाई एएसए ग्रुप नामक युट्युव च्यानल मार्फत भिडियो सार्वज’निक गरिएको हो ।
आना होन्छेन, सरिता लिङ्देन र आरोशी थापा मिलेर मनो’रन्जनात्मक तथा उत्प्रे’रणात्मक प्रस्तुतीहरु प्रवाह गर्ने उद्धेश्यले एएसए ग्रुप प्रोडक्सनको स्था’पना गरेका हुन् । समाजका अन्य ब्यक्तित्वहरुको कला, प्रतिभा, सिर्जना र बिचा’रहरुलाई पनि महत्व दिदै आफूसंग भएका क्षमता र कलामार्फत विभिन्न प्रस्तुतिहरु यस युट्युव च्या’नल मार्फत पस्किदै जाने संस्थाले जना’एको छ । – न्यूज24 नेपालबाट
सुनको मूल्यमा गिरावट, कतिमा कारोबार भइरहेको छ ?
May 16, 2021 admin समाचार 4643
नेपाली नायिकाको अहिले यो हाल ,पहिले कस्ति थिइन् अहिले यस्ति भइन,कठै बिचरा ! (हे’र्नुहोस् भिडियो )
June 10, 2021 admin समाचार 3880
नेपाली कला क्षेत्रमा ज’म्दै गरेको एउटा नाम हो निशा घिमिरे । कुनै बेला कलाकारितामा उच्च शिक्षाको क्रममा भा’रतमा सवारी दु’र्घटनामा परेकी उनको उपचार राम्रो’सम्ग भइरहेको छैन । उपचारको अ’भावले उनका यो अवस्थामा पुगेको चलचि’त्रकर्मी दीपक
November 4, 2020 admin समाचार 8407
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (227691)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (220634)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (220476)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (217541)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (216571)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (215262)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (213976)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (213900)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (195619)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (182368)